သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် မည်သူနည်း။ “ဘုရားသခင်တည်ရှိသလား” ဟူသော မေးခွန်းနှင့် မတူပေ။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် တည်ရှိသလောဟူသော မေးခွန်းကို လူအနည်းငယ်ကသာ မေးမြန်းတတ်ကြသည်။ လွန်ခဲ့ သော နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ခန့်တွင် ဣသရေလလူမျိုးများကြားထဲတွင် သခင်ယေရှုသည် ဤလောက၌ စစ်မှန်သော လူသားတစ်ဦး အဖြစ် အသက်ရှင်ခဲ့သည်ကို ငြင်းဆိုဖွယ်ရာမရှိပေ။ သခင်ယေရှု၏ ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သည့်အခါတိုင်းတွင် ငြင်းခုံမှုများ ရှိတတ်ကြသည်။ တခြားသော ဘာသာကြီးတို့သည် သခင်ယေရှုကို ပရောဖက်တစ်ပါး၊ ကောင်းသော ဆရာတပါး၊ သိက္ခာရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တပါးဖြစ်သည်ဟု သွန်သင်တတ်ကြသည်။ သခင်ယေရှုသည် ပရောဖက်တပါး၊ ကောင်းသောဆရာတပါး နှင့် သိက္ခာရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တပါးထက် သာလွန်သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာက ပြောခဲ့ပါသည်။
C.S. Lewis က သူ၏စာအုပ် Mere Christiarity ထဲတွင် ဤသို့ ရေးသားထားခဲ့ပါသည်။ “သခင်ယေရှု အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လူတွေပြောလေ့ရှိသော မိုက်မဲသော အရာတို့ကို ရပ်တန့်ရန် ကျွန်တော်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့သည်။ “ကျွန်တော်သည် သခင်ယေရှုကို ကြီးမားသော အကျင့်စာရိတ္တ သွန်သင်သောဆရာအဖြစ် ယုံကြည်လုနီးပါး ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် သူကြွေးကြော်ခဲ့သောသူသည် ဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို ကျွန်တော် မလက်ခံခဲ့ပေ။ ၄င်းခံယူချက်ကို ကျွနု်ပ်တို့ မဖွင့်ပြော အပ်သော စကားပဲဖြစ်ပါသည်။ သာမန်လူသားတစ်ဦးက သခင်ယေရှုသည် ကြီးမားသော အကျင့်စာရိတ္တသွန်သင်သူဟု ပြောခဲ့ လျှင် အဓိပ္ပာယ်မရှိပေ။ သူသည် စိတ်ဝေဒနာရှင် (သို့) ကြက်ဥကို ခေါက်ကွဲပြီး ရေနွေးထဲတွင် ကြိုချက်သော သူနှင့် တူပါလိမ့် မည်။ (သို့) သူသည် ငရဲကို အုပ်စိုးသူ နတ်မင်းကြီးပဲဖြစ်ပါသည်။ မိတ်ဆွေသည် ရွေးချယ်မှုပြုနိုင်သည်။ မိတ်ဆွေသည် သခင် ယေရှုကို ဘုရားသခင်၏ သားတော် (သို့) ရှုးသွတ်သောသူ (သို့) တခြားအပြစ်ဒုက္ခရိုက််ပြုသောသူဟု ပြောနိုင်ပါသည်။ သူ့ကို နတ်တစ်ယောက်အဖြစ် သတ်ပစ်နိုင်သည်။ သူ့ကို စံတွေးဖြင့်လည်း ထွေးနို်င်သည်။ သို့သော် အဓိပ္ပာယ်မရှိသော စကားဖြစ်သည့် သခင်ယေရှုသည် ကြီးမားသော ဆရာတပါးဖြစ်ခြင်းအားဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့သည် အဆုံးမသတ်အပ်ပေ။ ကျွနု်ပ်တို့ စိတ်ထင်သည့်အတိုင်း သူ့ကို မတွေးတောအပ်ပေ။ သူသည် ကျွနု်ပ်တို့တွေးတောခြင်းကို ဂရုစိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုက မိမိကိုယ်ကို မည်သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ကြွေးကြော်ခဲ့ပါသနည်း။ သူသည် မည်ကဲ့သို့ သော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းကို သမ္မာကျမး်စာက ပြောခဲ့သနည်း။ ပထမအနေနှင့် ယောဟန်၊ ၁ဝး၃၀ ထဲတွင်ရှိသော သခင်ယေရှု၏ စကားများကို ကြည့်ကြပါစို့။ “ငါသည် ငါ့ခမည်းတော်နှင့် တလုံးတဝဖြစ်၏။” နက်နဲစွာ စဉ်းစားခြင်းမရှိပဲ ကြည့်သော် သူသည် မိမိ ကိုယ်ကို ဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို ကြွေးကြော်ခြင်းနှင့်မတူပေ။ သို့သော် ဤဖော်ပြချက်အပေါ် ယုဒလူတို့၏ တုန့်ပြန်မှုကို ကြည့်ကြ ပါစို့။ “ယုဒလူတို့က၊ ကောင်းသောအမှုကြောင့် ခဲနှင့် ပစ်မည်မဟုတ်၊ သင်သည် လူဖြစ်လျက်ပင် ဘုရားသခင်၏ ယောင်ဆောင်၍ ဘုရားသခင်ကို လွန်ကျူးသောကြောင့် ခဲနှင့် ပစ်မည်ဟု ဆိုကြ၏” (ယောဟန်၊ ၁ဝး၃၃)။ သခင်ယေရှု၏ ဖော်ပြချက်တို့သည် သူသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ဟု ကြွေးကြော်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို ယုဒလူတို့က သိရှိခဲ့ကြသည်။ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော ကျမ်းပိုဒ်တို့ကိုကြည့်လျှင် ယုဒလူတို့ပြောသော စကားကို သခင်ယေရှုက မှားသည်ဟု မပြောခဲ့ပေ။ သူက “ငါသည် ဘုရားသခင် မဟုတ်ပေ” ဟု မပြောခဲ့ပေ။ သခင်ယေရှုက သူသည် စစ်မှန်သော ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း ကြွေးကြော်ခြင်းကို “ငါသည် ငါခမည်းတော်နှင့် တလုံးတဝတည်းဖြစ်သည်” ဟူသော အချက်အားဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်” (ယော၊ ၁ဝး၃၀)။ ယောဟန်၊ ၈း၅၈ သည် တခြားသော ဥပမာတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုက “ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ အားဗြမာမဖြစ်မှီ ငါဖြစ်၏” ဟု မိန့်တော်မူ ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ယုဒလူမျိုးတို့သည် ကျောက်ခဲကို ယူ၍ သခင်ယေရှုကို သတ်ပစ်ရန် ကြိုးစားပြန်ပါသည်။ ယောဟန်၊ ၈း၅၉ တွင် သခင်ယေရှုက “ငါ” ဟု ပြောဆိုခြင်းသည် ဓမ္မဟောင်းထဲ၌ ရှိသော ဘုရားသခင်၏ နာမတော်ကို ဖြစ်သဖြင့် သူသည် ဘုရား ဖြစ်ကြောင်းကို ရည်ညွှန်းလိုခြင်းဖြစ်မည် (ထွက်၊ ၃း၁၄)။ သခင်ယေရှုသည် မိမိကိုယ်ကို ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘုရားသခင်ကို ပြစ်မှားကြောင်း ကြွေးကြော်သည်ကို ယုဒလူတို့သည် မယုံကြည်လျှင် အဘယ်ကြောင့် ယုဒလူတို့က သူ့ကို ခဲဖြင့် သတ်ပစ်လိုကြပါသတည်း။ ယောဟန်၊ ၁း၁ တွင် “နှုတ်ကပတ်တော်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်” ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ယောဟန် ၁း၁၄ ထဲတွင် “နှုတ်ကပတ်တော်သည် လူ့ဇာတိကို ခံယူမည်” ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ သခင်ယေရှုသည် လူ့ဇာတိကို ခံယူသော ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း ကြွေးကြော်လိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သောမက “အကျွနု်ပ်၏အရှင်၊ ဘုရားသခင်” ဟု ဝန်ခံခဲ့ ပါသည် (ယောဟန်၊ ၂ဝး၂၈)။ သခင်ယေရှုက မှားသည်ဟု မပြောခဲ့ပေ။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက သခင်ယေရှုကို “ကျွနု်ပ်တို့၏ မြင့်မြတ်သော ကယ်တင်ရှင်ဘုရားသခင် သခင်ယေရှုခရစ်တော်” (တိ၊ ၂း၁၃) ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ တမန်တော် ရှင်ပေတရု ကလည်း “ကျွနု်ပ်တို့၏ ကယ်တင်ရှင်ဘုရားသခင်၊ သခင်ယေရှုခရစ်တော်” ဟု ဖော်ပြထားပါသည် (၂ပေ၊ ၁း၁)။ ခမည်းတော် ဘုရားသခင်ကလည်း သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း သူကိုယ်တိုင်က လုံးဝ အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါသည်။ သို့သော် သားတော်နှင့် ပတ်သက်၍ သူက “ဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်၏ ယဇ်ပလ္လင်သည် အစဉ်ထာဝရတည်မြဲပါစေ။ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားသည်လည်း ကိုယ်တော်၏ နိုင်ငံတော် အုပ်စိုးသော သန်လျက်ဖြစ်ပါစေ”။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲတွင် ခရစ်တော်သည် ဘုရား ဖြစ်ကြောင်းကို ကြွေးကြော်ခဲ့ပါသည်။ အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့ အဘို့ သူငယ်ကို ဘွားမြင်၏။ ငါတို့အား သားကို သနားတော်မူ၏။ ထိုသူသည် အုပ်စိုးခြင်းအာဏာစက်ရှိလိမ့်မည်။ နာမတော်မူကား အံ့ကြဖွယ်၊ တိုင်ပင်ဘက်၊ တန်းခိုးကြီးသော ဘုရားသခင်၊ ထာဝရအဘ၊ ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဟု ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကို ခံတော်မူလိမ့်မည် (ဟေရှာ၊ ၉း၆)။
ထို့ကြောင့် C.S. Lewis က သခင်ယေရှုသည် ကောင်းသော ဆရာတပါးအဖြစ် ယုံကြည်ခြင်းသည် မှားယွင်း သည် ဟု ပြောခဲ့ပါသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ခြင်းကို တိကျ၍ ငြင်းဆို၍ မရပေ။ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင် မဟုတ်လျှင် သူသည် လိမ်လည်သူပဲဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ပရောဖက်တပါး၊ ကောင်းသောဆရာတပါး၊ လူကြီးလူကောင်း တယောက်သာ မဟုတ်ပေ။ သခင်ယေရှုပြောကြားခဲ့သော စကားကို ဘေးချိတ်၍ မျက်မှောက် “ပညာရှင်များ” ကြွေးကြော်သော “စစ်မှန်သော သခင်ယေရှုသမိုင်း” သည် သမ္မာကျမ်းစာ ဖော်ပြချက်နှင့် မကိုက်ညီသောအရာ များစွာရှိပါသည်။ သခင်ယေရှု ပြောခြင်း (သို့) မပြောခြင်း နှင့် ပတ်သက်၍ နှုတ်ကပတ် တရားတော်ကို စောဒကတက်၍ ကျွနု်ပ်တို့သည် မည်သို့သော ပုဂ္ဂိုလ် များ ဖြစ်ကြပါသနည်း”။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ခုနှစ်ခန့်က သခင်ယေရှု ပြောခဲ့သောအရာ (သို့) မပြောခဲ့သော အရာတို့ကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ့၍ သခင်ယေရှုနှင့် အသက်ရှင်ပြီး၊ သူ့ကို အစေခံကာ၊ သူ့ထံ နည်းခံသော သူတို့၏ စကား ကို “ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်” များက မည်သို့ ဖယ်ရှားနိုင်မည်နည်း။
သခင်ယေရှု၏ အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းမေးမြန်းရန် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ (သို့) မဖြစ်သည်ဟူသော မေးခွန်းကို ဆွေးနွေးရန် အဘယ့်ကြောင့် လိုအပ်သနည်း။ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆင်ခြင်ရန် အချက်သည် သူသည်ဘုရားသခင်မဟုတ်ခဲ့လျှင်၊ သူ၏ အသေခံခြင်းသည် လောကသားတစ်ခုလုံး၏ အပြစ်များ ပေးဆပ်ရန် မလုံလောက်ပေ ဟူသော အချက်ပဲဖြစ်ပါသည် (၁ယော၊ ၂း၂)။ ဘုရားသခင်သာလျှင် ထိုသို့သော ပြစ်ကြွေးပေးဆပ်ခြင်းအမှုကို ပြုနိုင်သည် (ရောမ၊ ၅း၈၊ ၂ကော၊ ၅း၂၁)။ ကျွနု်ပ်တို့၏ ပြစ်ကြွေးများ ပေးဆပ်ရန် သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ရမည်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် အသေခံနိုင်ရန် လူသားတစ်ဦးဖြစ်ရန် လိုအပ်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု၏ ဘုရားဖြစ်ခြင်းသည် သူသာလျှင် ကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ခြင်းကို ပြသခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုက ဤသို့ပြောသော ကြောင့် သူသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါသည်။ “ငါသည် ကမ်းခရီးဖြစ်၏။ သမ္မာတရားလည်းဖြစ်၏။ အသက်လည်းဖြစ်၏။ ငါ့ကို အမှီ မပြုလျှင် အဘယ်သူမျှ ဘုရားသခင်ထံသို့ မရောက်ရ” (ယောဟန်၊ ၁၄း၆)။